သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းကရင်ကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
ကရင် (မြန်မာပြည်): ကရင်ပြည်နယ်မှသင်၏ကျောင်းသားများကိုနားလည်ခြင်း (မြန်မာပြည်) နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR /, G နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ. အဆိုပါ. Bugbee
မြန်မာပြည် (မြန်မာ) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်, 1950 ကတည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိနှိပ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခ. မြန်မာနိုင်ငံကျော်ပါဝင်သည် 100 ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများ, အဆိုပါလူသိအများဆုံးအချို့တို့သည်ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ကရင်, ကရင်နီ, ကချင်, ရှမ်း, Rohinyan, နှင့်မွန်ပြည်နယ်. ကရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်, ထောင်နှင့်ချီထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာများမှာ.
စကောကရင်, ပိုးကရင်ကရင်, မြန်မာ, နှင့်အင်္ဂလိပ်
ကရင်ပြည်သူလူထုအစဉ်အလာအနောက်တိုင်းစတိုင်ပညာရေးအပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုထားရှိပါပြီ. တွင် 1962, ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွေ့ခဲ့ရပါပြီ, ပြီးတော့ကတည်းကခဲ့ကြသည်, ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းကြောင့်, ကရင်ဒေသများရှိကျောင်းများသည်ပညာရေး၏အမြင့်မားတဲ့စံနှုန်းပေးနိုင်ခြင်းပါပြီ. မှစ. 1997, တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ရပ်ရွာလူထုမှအခြေခံပညာရေးများကိုရန်ကြိုးစားခဲ့ကြ.
အခြေခံကရင်ကျောင်း, သင်ခန်းစာများကိုသုံးဘာသာစကားများပါဝင်သည် (ကရင်, အင်္ဂလိပ်, နှင့်မြန်မာ); သင်္ချာနှင့်အထွေထွေသိပ္ပံ; နှင့်လူမှုရေးလေ့လာမှုများ. ကျောင်းသားများကိုလည်းသန့်ရှင်းရေးနဲ့ Civic အတွက်အတန်းကိုရရှိ, ပြည်တွင်းသိပ္ပံ, နှင့်ဥယျာဉ်.
အများစုကကရင်ဒုက္ခသည်တွေစခန်းထဲမှာကျောင်းတက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်, ဤမျှလောက်များစွာသောအချို့သောအခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံများတွင်အချို့သောနောက်ခံများ. သို့သော်, သူတို့ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်အယူအဆနှင့်အတူရုန်းကန်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်, စာအရေးအသား, နှင့်အမေရိကန်သမိုင်း. ကရင်ယဉ်ကျေးမှုကိုရေကဲ့သို့မြေနှင့်သယံဇာတများကိုတန်ဖိုးထား, ဒါကြောင့်ကရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဂေဟဗေဒအပေါ်ယူနစ်မှာ excel စခွေငျးငှါ.
ကျောင်းသားများကြားဖြတ်မပြောဘဲနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဆရာ, ဆရာမရိုသေလေးစားမှုကိုပြသလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်, မျက်လုံးချင်း disagreeing သို့မဟုတ်အောင်. ကရင်ကျောင်းသားသိတယ် အကယ်. မမှန်ကန်ကြောင်းတစ်ခုခုပြောနေကြသည်, ကကျွမ်းကျင်သူသကဲ့သို့သင်တို့အရှက်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ကောင်းသင်နှင့်အတူသဘောမတူမည်မဟုတ်. ကရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအခြားသူများ၏ရှေ့တွင်လမ်းလျှောက်သည့်အခါမိမိတို့ခေါင်းပေါ်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသခွေငျးငှါ, နှစ်ခုတို့လက်ဖြင့်ဖြတ်သန်းပစ္စည်းများ, သူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌၎င်းတို့၏လက်နက်ကိုဖြတ်ကူး.
ဒါဟာအခြားတစ်ဦးချင်းစီကိုကျော်ဖို့ရိုင်းစိုင်းစဉ်းစားသည်. ကျောင်းသားများကိုတဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်လုပ်ဖို့ကအခြားအတန်းဖော်မေးရန်သတိထားပါ. ကျောင်းသားများတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်လူတန်းစားအတွက်မေးခွန်းများကိုမေးမွနျးခံရဖို့အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်. ဒါဟာကျောင်းသားများကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အဘို့အဖြေကြားသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်မေးဖို့မေးခွန်းတွေရဲ့အကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်.
ကရင်ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, ကလူကနဦးဖိတ်စာကျဆင်းမည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်. သငျသညျဖြစ်ရပ်တစ်ခု join ဖို့ကရင်မိသားစုအတှကျမြျှောလငျ့ပါလျှင်, သငျသညျထပ်တလဲလဲမေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. "no" ဆိုတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကကျိုးနွံဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ကိုပြသနေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟု. အဖြစ်မှန်မှာတော့, ကြောင်းရိုင်းစိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးကရင်အမှန်တကယ်ဆရာထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားချက်ကိုငြင်းဆန်ချင်မည်မဟုတ်. အစား, သူတို့ဖြစ်ကောင်းသွယ်ဝိုက် reply ထိုအခါမူကားထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ရန်မဟုတ်ဘူး.
ကရင်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြေရှင်းလေ့, ထိုကဲ့သို့သော "အန်တီ" သို့မဟုတ်အဖြစ် "ဦးလေး။ " သင် ပေး. သူတို့ကိုဤလမ်း addressing အားဖြင့်မိဘများအတွက်လေးစားမှုကိုပြသနိုင်ပါတယ်. မိဘများအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူးဆိုရင်တောင်, သင်သည်သူတို့၏ရိုးရာအသိပညာကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ဥပမာ, အများအပြားကရင်တန်ဖိုးမြေယာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျောင်းပြန်လည်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားထုတ်မှုဦးဆောင်လမ်းပြကူညီဖို့ကောင်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကအစကသူတို့အမွေအနှစ်ကိုတန်ဖိုးထား. များစွာသောဒုက္ခသည်များမောင်းထုတ်ရန်ပုံကိုသိတစ်ခုသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကင်းမဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်က, ဒါကြောင့်ကျောင်းကဖြစ်ရပ်များမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
အကွီးအကဲမြားအလွန်အမင်းကရင်ယဉ်ကျေးမှု၌လေးစားကြသည်. ကရင်လူငယ်အကွီးအကဲမြားနောက်ကွယ်မှလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့လေးစားမှုကိုပြသ. ဆရာများ, မိဘများနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များပုံမှန်အားဖြင့်ကရင်တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်အလွန်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်. ရပ်ရွာကရင်ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းမှာလည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်, နှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များကမကြာခဏတိုးချဲ့မိသားစုဝင်များအဖြစ်ယူဆနေကြသည်. လှည့်ပတ် 70% ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသို့မဟုတ်နတ်ကိုးကွယ်ကြသည်. ကျန်ရှိနေသေးသော 30% ခရစ်ယာန်များမှာ.
မိသားစုများယေဘုယျအားဖြင့်အတူတကွအစားအစာများကိုစား, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်စွာထက်စကားလက်ဆုံများအတွက်အချိန်အဖြစ်. စားနပ်ရိက္ခာမကြာခဏရောဂါပျောက်ကင်းရောဂါများကိုကူညီလမ်းသို့မဟုတ်အနာရောဂါအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်. သငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးကိုထောကျပံ့ဖို့သငျ့ကြောငျးတိုင်ပင်အတူလုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ဤအပါအဝင်မိမိတို့ကျောင်းသားကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပျနိုငျသောအရာကိုအစားအစာများကိုမိသားစုမေးမြန်းခြင်းအကြံပြုစေခြင်းငှါ.
https://ethnomed.org/culture/other-groups/burmese/Burmese ဒုက္ခသည်ကျန်းမာရေး 2_3_16 နောက်ဆုံး DGMQ.pdf / အမြင်ကိုယ်ရေး?ရှာဖွေရေး = burma
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကကရင်ကျောင်းသားများအဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ကရင်သင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.